अर्थमन्त्रीलाई कांग्रेसको प्रश्न- साधारण खर्च चलाउन मुस्किल भए बजेटमा रेल र पानीजहाज किन? :: Setopati
अर्थमन्त्रीलाई कांग्रेसको प्रश्न- साधारण खर्च चलाउन मुस्किल भए बजेटमा रेल र पानीजहाज किन?
प्रशन्न पोखरेल काठमाडौं, असार १
'अहिले हाम्रो मासिक अनिवार्य दायित्व ४० अर्ब छ। यो भनेको चालु खर्च हो जुन सरकारले जसरी पनि नगदमा भुक्तानी गर्नुपर्छ। यसका लागि हामीलाई केही समस्या भइरहेको छ।
अहिले भन्सारबाट महिनामा १५ अर्बजति राजश्व उठिरहेको छ। त्योभन्दा न्यून आन्तरिक राजश्व छ। यसले ४० अर्बको दायित्व पूरा गर्न गाह्रो भइरहेको छ,' खतिवडाले भनेका थिए।
प्रकाशित मिति: सोमबार, असार १, २०७७, ०६:५८:००